23-ABUU DAR AL-QIFAARI
"Saxabigii soo islaamiyey tolkiis oo idil."
Sahankii uu ugu jiray diinta xaqa ah:
Cali oo marti geliyay Abuu Dar:
Rasuulka (scw) wuxuu u soo jaleecay, soona qaabilay xaggii Abuu Dar, isagoo ugu yeeraya inuu soo islaamo, wuxuu ku dul aqriyay qur'aanka. Wax yar kamaba soo wareegan jeer durbadiiba uu Abuu Dar ku dhawaaqo towxiidka.
Markii uu Rasuulka (scw) geeriyooday, Abuu Dar wuu u adkeysan waayay inuu ku sii negaado magaallada Madiina, kadib markii magaalladaas uu ka dhintay sayidkeedii, ayna cidloobeen fadhiyadii cilmiga ee uu bixin jiray Xabiibka Rasuulka (scw). Wuxuu Abuu Dar u guuray miyiga Shaam.
Ma ahayn reero adduunyo:
Dulqaado intaad igala kulmaysid:
ugu bishaareeya kuwa maalka kaydsada kaawado naareed:
Dooddii dhexmartay Abuu Dar iyo Mucaawiye:
Suuratu al tawba.
Al-Rabada ayuu deggay:
Dardaarankii Rasuulka (scw) ee Abuu Dar:
1- wuxuu i faray jaceylka masaakiinta, iyo inaan iyaga ka mid noqdo.
2- wuxuu i faray inaan eego qofka iga hooseeya, oo aanan eegin qofka iga sareeya.
3- wuxuu i faray inaan qofna wax weydiisan.
4- wuxuu i faray inaan xiriiriyo qaraabada.
5- wuxuu i faray inaan ku hadlo xaqa, haba qaraaraadee.
6- wuxuu i faray inaan Alle dartii uga cabsan mid canaanaya canaantiisa.
7- iyo inaan badiyo oraahda: LAA XAWLA WA LAA QUWATA ILLAA BILLAAHI.
Waa hubaal inuu Abuu Dar fuliyay dhammaan dardaarankaas wanaagsan ee uu siiyay macalinkii insaaniyadda ee dunidan soo mara. Cali Binu Abii Daalib Ilaah ha ka raalli noqdee ayaa isagoo ka sheekeenaya Abuu Dar yiri "maanta lama arko qof si Alle dartii aan ugu aaba-yeelin mid canaanaya canaantiisa aan ka ahayn Abuu Dar". Waa hubaal hadalkaas, oo wuxuu si bareero leh ugu nasteexeen jiray madaxda muslimiinta, isagoo aan ka cabsanaynin awoodda ay leeyihiin. Masaakiinta ayuu aad u jeclaan jiray, iyagana ayuu ka mid ahaa. Weligii qofna ma weydiisan maal ama hanti. Amiirka gobolka Shaam ayaa mar u soo diray lacag gaaraysa ilaa 300 diinaar, isagoo ku yiri "lacagtaan danahaaga ugu kaalmayso". Jawaabtii Abuu Dar waxay ahayd inuu lacagtii ku celiyay amiirkii, isagoo intaas daba dhigayna �amiirka shaam ma wuxuu waayay qof anniga iga tabar daran�.